केकीले मागिन ऋचा र अर्पणसँग भुतको भूमिका ! « Ramailo छ
केकीले मागिन ऋचा र अर्पणसँग भुतको भूमिका !
नायिका केकी अधिकारीले नायिका ऋचा शर्मा र निर्देशक अर्पण थापासँग फिल्मको भूमिका मागेकी छन् । कुनै सामान्य होइन, केकीले ऋचा र अर्पणसँग भुतको भूमिका मागेकी हुन् ।
प्रसंग हो, ऋचाले बनाएको पछिल्लो फिल्म ‘सुनकेशरी’ ट्रेलर लञ्च प्रेसमिटको । ‘सुनकेशरी’ मा नलिएपनि ‘सुनकेशरी २’ मा भने आफुलाई भुत बनाउन ऋचा र अर्पणलाई ठट्टा गर्दै केकीले आग्रह गरिन् । उनीहरुले पनि ‘सुनकेशरी २’ बनेमा केकीलाई नै भुत बनाउने बताए । तर के तर्साउने फिल्म ‘सुनकेशरी’को सिक्वले बन्ला ?
सिक्वेल जे भएपनि केकी र ऋचा ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ र ‘सुनकेशरी’ हिट बनाउनतिर लागेका छन् । बैशाख १४ गते केकीको ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ र जेठ ११ गतेदेखि ऋचाको ‘सुनकेशरी’ लाग्दैछ । केकीले ‘कोहलपुर एक्सप्रेस २’ बनाउने घोषणा गरि सकेकी छन् ।